QualComm wuxuu baraa xirfadaha processor-keeda cusub ee Snapdragon S4 | Androidsis
Processor Snapdragon S4 Waa mid ka mid ah kuwa ay filayaan shirkadaha sameeya taleefannada, waa wax aan la dafiri karin guusha uu Qualcomm ka dhex helayo noocyada casriga ah, markan waxay na siinayaan ilkaha ugu dhaadheer oo na tusaya xirfadahooda ugu fiican.
Waxay ku daabaceen war-saxaafadeed bogooda ay ku muujinayaan waxa ay ku qaban karaan kamaradaha casriga ah. Fiidiyowyada ayaa la sameeyay intii lagu jiray Waxaaad 2012 ee Las Vegas laakiin maahan ilaa maalmo ka hor in lagu daabacay YouTube.
Sida laga soo xigtay ereyada QualComm Iyadoo la adeegsanayo processor S4, qalab kasta oo mobilo ah ayaa sawirro ka qaadi kara illaa 20 megapixels iyo sidoo kale duubista FullHD 1080p y ku shaqee illaa saddex kamaradood oo isku qalab ah, kan dambe ayaa badanaa loo isticmaalaa 3D. S4 sidoo kale waxay la timid qalabaysan tiknoolajiyada QualComm iyo sidoo kale tiknoolajiyada kamaradaha 3A (diirada otomaatiga, soo-gaadhista otomaatiga iyo dheelitirka cad cad) iyo sidoo kale xasiliyaha sawirka iyo dib u dhaca sawirka.
Fiidiyowgan labaad waxaan ku arki karnaa sida uu u adeegsado tilmaamaha si uu ugu sameeyo ficillo kala duwan taleefanka, wax aad ugu eg Kinect-ka Microsoft, howlo si weyn looga faa'iideysan karo tikniyoolajiyadan cusub.
Waxyaabaha aniga sida aadka ah ii walwal galiyay waa arinta shatiyada, waxaan rajeynayaa in Microsoft aysan ku dacweyn doonin xuquuqda lahaanshaha oo aan aragno dib u dhac ku yimid tiknoolajiyadan, wax aan aragnay marmar iyo inkale, Apple?
Iyada oo la hagaajinayo software sida FastCV ka QualComm iyo Augmented Reality SDK, waxqabadka kamaradu wuxuu noqon karaa khibrad cusub mustaqbalka. Kuma aqaano adiga laakiin waxaan horeyba u rajeynayaa inaan arko taleefannada casriga ah ee sannadka dambe.
source: Blog QualComm , Masuul QualComm
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » QualComm wuxuu baraa xirfadaha processor-keeda cusub ee Snapdragon S4
Akhristaha Mantano. Akhristaha weyn ee buugaagta iyo pdf.